Isku aadka Kooxaha Yurub oo lasoo saaray - BBC News Somali
Image caption isku aadka kooxaha ee rubac dhamaadka koobka horyaalada Yurub
Manchester United oo ka hortegi doonta Bayern Munich, halka PSG iyo Chelsea ay isku aadeen.
Kooxda Manchester United ayaa ka hortegi doonta kooxda koobkan loo tartamaya haysata ee Bayern Munich rubac dhamaadka koobka Horyaalada Yurub ee Champions League-ga halka ay Chelsea is arki doonaan kooxda Paris St-Germain.
Horyaalka dalka Spain ee Barcelona ayaa waxa ay wada ciyaari doonaa kooxda ay isku hayaan La Liga-ha dalkaasi ee Atletico Madrid, halka Real Madrid ay kulmayaan kooxda Borussia Dortmund.
Lugta hore ee ciyaaraha horyaalada Yurub ayaa la ciyaari doonaa 1-da iyo 2-da bisha April, halka lugta dambana la ciyaari doono 8-d iyo 9-ka isla bisha April.
Ciyaarta final-ka ee sanadkan ayaa maalinta Sabtida ee ay taariikhdu tahay 24.ka bisha May lagu qaban doonaa garoonka Estadio da Luz ee magaalada Lisbon ee ay ku ciyaarto kooxda Banfica.
Manchester United ayaa waxa ay ka soo kabsatay guuldaro 2-0 oo ay ku hoggaaminaysay kooxda Olympiakos, kooxda heysata horyaalka Ingariiska ayaa kooxda Giriiga waxa ay ku tuntay 3-0 lugtii labaad ee ciyaarta taasoo uu u baahnaa tababare David Moyes iyo ciyaartooydiisa, halkaana ay ugu suurtagashay in ay u soo gudubto wareega rubac dhamaadka, halka kooxda Chelsea ay reebtay kooxda Galatasaray.
Waxa ayna haatan fooda is darayaan kooxda hogaamineysa horyaalka Jarmalka ee Bayern Munich, kooxdaas oo ay aad ugu badan tahay in ay sii heysato koobka kaddib markii ay kooxda Arsenal ku tuntay celcelis dhan 3-1.
Waxa ay ciyaarta labada kooxood xusuus u noqon doontaa ciyaarta finalka horyaalada Yurub ee 1999-kii ay kooxda Manchester waqtiga dheeraadka ay Ole Gunnar Solskjaer iyo Teddy Sheringham ay guusha gacanta u galiyeen tababare Alex Ferguson.
Bayern ayaa Man United kaga soo baxday gool tirsi rubac dhamaadkii horyaalkii 2009-kii 2010-kii, halkaas oo ay ku soo afjarantay rajadii horyaalka Ingiriiska ee aheyd in ay markii saddexaad oo is xigta ay gaaraan kama dambeysta koobka.
Kooxda hogaanka u heysa horyaalka Ingariiska ee Premier League-ga ee Chelsea ayaa booqaneysa caasimadda Faransiiska ee Paris si ay ula ciyaarto kooxda PSG.
Kooxda Real Madrid oo 9-2 celcelis uga soo baxday kooxda Schalke ayaa waxa ay ku aaday kooxda Dortmund ee dalka Jarmalka.
Atletico Madrid oo kaalinta labaad kaga jirto hoyaalka Spain oo 5-1 uga soo baxay kooxda AC Milan oo todoba jeer horay ugu guulaysatay koobka Horyaalada Yurub ayaa waxa ay is arki doonaan kooxda ay xifiiltanka wadaagaan ee Barcelona.
Labadan kooxood ayaa bishii Janaayo ku kala baxay barbaro 0-0 kulankii ka tirsanaa horyaalka ee ay ku ciyaareen garoonka Vicente Calderon stadium ee kooxda Atletico Madrid.
Kulanka Sabtidan ee Chelsea iyo Arsenal
Chelsea oo u gudubtay semi-finalka Champions League